ससुरा, श्रीमान, नन्दे भाईद्धारा २१ बर्षिया युवती बलात्कृत - Khaptad Nepal
ससुरा, श्रीमान, नन्दे भाईद्धारा २१ बर्षिया युवती बलात्कृत
१८ आश्विन २०७७, आईतवार १६:५८ October 4, 2020 Khaptad NepalLeaveaComment on ससुरा, श्रीमान, नन्दे भाईद्धारा २१ बर्षिया युवती बलात्कृत
बझाङ– जिल्ला अस्पताल बझाङको अन्तरङ्ग विभाग (इन्डोर) मा भर्ना भएकी एक २१ बर्षिया युवती छटपटी र चित्कारले वेलाबेला छेउछाउका विरामी र कुरुवाको ध्यान खिच्ने गरेको छ । उनि घरी होसमा आउछिन । स्वास्थ्यकर्मीहरुस“ग आफुले भोगेको पिडाको कहाली लाग्दो कहानी सुनाउछिन । पुरा कुरा सुनाउन नपाउदै उनि फेरी बेहोस हुन्छिन ।
शनिवार बिहान संवाददातासँग भेट हुदाँ उनि चार दिन पछि पुर्ण होसमा आएकी थिएन । ‘पापीहरु सबै लागेर मलाई बलात्कार गरे । आफुले नपुगेर बाहिरका मान्छेलाई पनि बोलाएर उस्तै गर्न लगाए’ उनले भनिन ‘पानी त खान देउ भन्दा पनि दिएनन । उल्टै सबैले मुखमा पिसाब फेरिदिए । प्यास मेटाउन त्यो पनि पनि खा“ए । चुरोटले जिउभरी पोले ।’ आफुले भोगेको चरम, यातना र श्रङ्गखलाबद्ध बलात्कारको पिडा सुनाउन खोज्दा खोज्दै फेरी बेहोस भइन ।
अनि बेहोसी मै रुदै बर्बराउन थालिन । ‘मैले त कसैको पाप त गरेको थिइन । मलाई यो हालतमा किन पुर्याए, मैले कसको के विगार गरेको थिए ?’ यति भन्दा भन्दै उनले हातमा लगाएको क्यानुला चुडिन । ‘तपाईहरुलाई थाहा छ, अव म आमा बन्न सक्दिन । मेरो नभए मेरो पेट किन काट्यो ? कसले काट्यो ? मैले के अपराध गरें ?’ उनले भनिन ।
नजिकै बसेर उनको यो हालत हेरिरहेकी र उनि माथी भएको अत्याचारबारे जानकार एक जना नर्स आ“खा भरी आसु“ पार्दै डाक्टर बोलाउन गइन । केही बेरमै पुगेका डाक्टर सन्दिप ओखेडा र मिलन खड्काले उनलाई फकाउदै हातका नसा खोजे, फेरी क्यानुला घोंपे र इन्जेक्सन लगाइ दिए । सुई लगाएको केही बेरमा उनि सुस्ताउन थालिन ।
उनि शान्त भए पछि पिडितका काकाले घटनाको बेलिविस्तार लगाए । माइती घर बुङ्गल नगरपालिका वडा नं २, भएकी ति युवतीको तीन बर्ष पहिला मात्रै वित्थड चिर गाउ“पालिका वडा नं ९, सुनकुडाका एक युवक स“ग विवाह भएको रहेछ । नौ महिना कै उमेरमा छोडेर आमाले अर्कै विवाह गरे पछि काकाकाकीको संरक्षणमा हुर्केकी उनलाई काकाले नै २०७४ असारमा कन्यादान गरेछन । ‘पहिलो बर्ष त राम्रै थियो । त्यस पछि मेरी छोरी माथी जे भयो म कसरी बताउ“ ?’ पिडितका काकाले भने ‘दुख गरेर हुर्काएकी मेरी छोरीलाई राक्षसहरुले दिनु दुख दिएछन’ ।
विवाह गरेको दुइ वर्ष बढी भैसक्दा पनि उनको कोखबाट बच्चा नभए पछि गत बर्ष कार्तिक २८ गते उपचारका लागि भनेर युवती, उनका श्रीमान, सासु ससुरा र नन्द सुनकुडाबाट भारत जाने भनेर हिडेका रहेछन । घरबाट हिडेको एक हप्ता सम्म सासुको माइती घर बैतडीको गड भन्ने ठाउ“मा बसेर स्थानिय धामी र बैद्यले उनको उपचार गर्ने भन्दै झारफुक पनि गरेछन । त्यहा“बाट उनिहरु सबै जना भारतको व्यङ्गलोर पुगे । व्यङ्गलोरमा काम नपाए पछि पिडित युवती सहित सासु र नन्दलाई बेङ्गलोर मै रहेको आफ्नो जेठी छोरीको कोठामा छोडेर उनिहरु काम खोज्न तामिलनाडु पुगे ।
तामिलनाडुको जिपुर अग्नासी भन्ने ठाउँको एउटा कपडा कारखानामा सबैको लागि काम खोजेर सुसुरा र श्रीमान उनीहरुलाई लिन व्यङ्गलोर पुगे । उनिहरुको साथ लागेर व्यङ्गलोरमा रहेका उनका नन्दको परिवार पनि काम गर्न तामिलनाडु गयो । कारखानाले नै उपलब्ध गराएको दुइवठा सुत्ने कोठा र एउटा किचन भएको फल्याटमा उनिहरु बस्न थाले । महिलाहरु (पिडित युवती, सासु र नन्द) दिउ“सो कम्पनीमा गएर धागो बनाउने काम गर्थे । पिडितका श्रीमान १५ दिन दिउसो र १५ दिन राती त्यही कम्पनीमा चौकीदारी गर्थे । ससुराको दिउसोको डिउटी थियो ।
‘यसको श्रीमानको राती डिउटी परेको दिन ससुरोले सुत्ने बेला दुधमा बेहोस हुने औसधी हालेर खुवाउदो रहेछ । अनि बलात्कार गर्ने रहेछ’ पिडितका काकाले भने ‘श्रीमान कोठामा नभएको रात आफुमाथी यौन सम्पर्क भएको कुरा छोरीले विहान मात्रै (शरिरमा लागेको विर्य आदीको माध्यमबाट) थाहा पाउने रैछ ।’ दिनहु“ श्रीमान नभएको बेला सम्पर्क हुन थाले पछि उनले एक दिन ससुराले दिएको दुध खाए जस्तो मात्रै गरेर सुट्टुक फालिदिए पछि घटनाको रहस्य पत्ता लागेको उनले बताए । ‘त्यो दिन उसले दुध नखाएर सुतेकोले उ होस मै रहिछ । सबै सुते पछि राती उसको कोठामा ससुरो आएर जवरजस्ती गर्न थालेछ । उ चिच्याए पछि सासु र ससुरा लागेर उसलाई कुटे छन । सासुले हातखुट्टा च्यापिछन, ससुराले बलात्कार गरेछन’
यो घटनाको श्रृङखला २०७६ मंसिंरबाट सुरु भएको उनले बताए । भोलीपल्ट विहान ससुराले गरेको सबै कुकर्म उनले श्रीमानलाई बताइन तर श्रीमानले पनि उनलाई साथ दिनुको सट्टा उल्टै ससुरालाई साथ दिए । त्यस पछि बलात्कार र यातनाको क्रम झन हिस्रक हुदै गयो । ‘त्यो कुरा श्रीमानलाई भनिसके पछि त राक्षसहरु झन सास्ती दिन थालेछ’ पिडितका काकाले छोरीलाई उदधृत गर्दै भने ‘रक्सी खाएर तिनै जना (श्रीमान, सुसुरा र नन्दको श्रीमान) मातेर आउथे । बलात्कार गर्न नदिए, चुरोटले स्तन, पेट, तिघ्रा र संवेदशिल अंगमा पोल्थे । यो कुरा बाहिर भनिस भने मारि दिन्छु भन्थे । अनि तिनै जना रात भर स“गै बलात्कार गर्थे’ यसै विच पिडित युवती पेटमा गर्भ रह्यो । दुइ महिना सम्म महिनाबारी नभएको थाहा पाए पछि उनका ससुराले नै तामिलनाडुको एक अस्पतालमा लगेर उनको गर्भ पतन गराए ।
‘गर्भ पतन गराएकै दिन दुइ जना अन्य मानिसहरु बोलाएर पाँच पाँच हजार भारु रकम लिएर फेरी उसलाई बलात्कार गर्न लगाए छन’ पिडितका काकाले भने ‘बाबु र छोरा ढोकामा बसेर उनिहरुहरुलाई भित्र पठाएछन । पिडाले छटपटाएकी छोरीले पानी देउ भन्दा उसको मुखमा पिसाब फेरी दिएछन’ त्यस दिन बाहिरबाट बलात्कार गर्न आउने दुइ जनाले नेपाली बोलेको थाहा पाए पछि मानिसहरु भने छोरीले नचिनेको उनले बताए ।
त्यस ससुरा, श्रीमान र नन्दको श्रीमानले आफुलाई मनलाग्दा आफुले बतात्कार गर्ने र अरुबेला पैसा लिएर बाहिरबाहिरका मान्छे बोलाएर नियमित बलात्कारमा लगाउने गरेका रहेछन । यसै विच उनलाई बेश्याबृतीमा लगाउने उद्देश्यले उनको स्थायी बन्ध्याकरण (मिनिल्याप) पनि गराइएको रहेछ । त्यो कहिले र कसरी गरायो भन्ने कुरा पिडितलाई थाहा नभएको र सम्भवत उनलाई बेहोस बनाएर त्यसो गरिएको हुन सक्ने काकाको आसंका छ ।
‘उनको देह व्यापार गरेर पैशा कमाउने उद्देश्यले बन्ध्याकरण गरेको देखिन्छ । उसले भोगेको शारिरिक र मानसिक यातना सामान्य मान्छेले कल्पना गर्नै नसक्ने खालको छ’ जिल्ला अस्पतालकी मनोसामाजिक परामर्शकर्ता शान्ती अवस्थीले भनिन ‘लगातारको बलात्कार र यातनाका कारण उसलाई गम्भिर खालको मानसिक समस्यामा परेकी छ’ उनले नियमित उपचार पाएमा केही उनलाई यो समस्याबाट मुक्त गराउन सकिने र यसको लागि समय लाग्ने बताईन ।
जिल्ला अस्पतालका डाक्टर मिलन खड्काका अनुसार उनलाई ‘मल्टी पर्सनालिटी डिसअर्डर’ भन्ने मानसिक समस्या रहेको छ । उनले कुनै कुनै बेला मात्रै युवती पुर्ण होसमा आउने गरेकी बताए । ‘चरम यातना र मानसिक टर्चर पछि यस्तो समस्या हुन्छ । यस्तो अवस्थामा मानिसले म को हुँ भन्ने नै चिन्दैन ।’ उनले भने ।
२०७६ मंसिर देखी सुरु भएको यो यातना र बलात्कारको क्रम निरन्तर जारी थियो । पिडित युवतीका काकाकाकी पनि भारतको तामिलनाडु राज्य कोलिडिम जिल्लाको नागापाटनम भन्ने ठाउ“मा बस्थे । त्यहा“बाट पिडित युवती बस्ने ठाउ“ अग्नासी पुग्न १२ घण्टाको बस यात्रा गर्नु पथ्र्यो । नियमित चौकीदारी गर्नु पर्ने र विदा नमिल्ने भएकोले उनका काकाले छोरी भेट्न पाएका थिएनन । तर उनको ससुरालाई भने बेलाबेला फोन गरिरहन्थे । ‘छोरीको मोवाइल थिएन , हप्ता १० दिनमा म उसको ससुरालाई फोन गर्थे । छोरीलाई ठिकठाक छ अहिले काममा छिन पछि कुरा गराई दिउला भन्थे’ उनले भने ‘हामी पनि होला त अर्काको घर गएकी छोरी के चियोचर्चाे गर्नु भन्ने ठान्थ्यौ ।ं’
फागुनको दोस्रो हप्ता तिर ससुराको मोवाईल चार्जमा छोडेको बेला उनका काकाले फोन गरेको पिडित युवतीले देखिछन । फोन उठायो भने कुटाइखाने डरले उनले काकाको नं इट्टाको टुक्राले भित्तामा लेखेर राखेको रहेछ । केही दिन पछि उनि स“गै काम गर्ने गोविन्द सिंह नामको एकजना भारत विहारको मान्छेले पिडित युवतीलाई निरास देखेर सोधी खोजी गरेको रहेछ । ‘छोरीले आफुलाई घरका मान्छेले निकै यातना दिएको कुरा विहारीलाई भनिछन । उनले भित्तामा लेखेको मेरो नं पनि देखाइछन र मेरो काका घर पुर्याइदेउ भनेर उनलाइए भनिछन’ पिडितका काकाले भने ‘तीनै गोविन्दले मलाई सम्पर्क गरे पछि सबै कुरा थाहा भयो । पछि उसैले गाडीमा छोरीलाई म कहाँ पठाए दिएको हो ।’
फागुन २८ गते छोरी आफ्नो सम्पर्कमा आए पछि कानुनी कारबाहीको लागि नेपाल आउने तयारी गर्दा गर्दै लकडाउन भएको र भदौमा मात्रै यहा“ आउन सम्भव भएको उनले बताए । ‘घटना थाहा पाउने वित्तिकै भारतको कानुन हामीलाई थाहा छैन । चिनजानको पनि कोही छैन । अपराधीलाई नेपाल मै कारबाही गर्नु पर्छ भनेर मैले जागिर छोडेर नेपाल आउने तयारी गर्दै थिए“ । त्यही बेला लकडाउन भैदियो’ उनले भने । उनले भदौ पहिलो हप्ता नेपाल आएको र १५ दिन क्वारेन्टाइन बसेर फर्के लगतै घटनाको विषयमा प्रहरीलाई जानकारी गराएको बताए ।
पिडितको जानकारीको आधारमा प्रहरीले पिडितका श्रीमानलाई पक्राउ गरी सकेको छ । पक्राउ परेका उनका श्रीमानले अपराध स्विकार गरिसकेको र थप अनुसन्धान भैरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख डिएसपी रुपक खड्काले बताए । ‘हामी यसको अनुसन्धान मै छौ । बाँकी अभियुक्तलाई कसरी सम्पर्कमा ल्याउने भन्ने बारेमा पनि छलफल भैरहेको छ’ उनले अभियुक्तको रुपमा रहेका पिडितका सासु, ससुरा नन्द, नन्दका श्रीमान भारत मै रहेकोले उनिहरुलाई कसरी ल्याउने भन्ने बारे पनि छलफल भैरहेको बताए ।
करिब एक दशकपछि बझाङमा जहाज संञ्चालन हुने सम्भावना:शनिबार बिमानस्थलको निरीक्षण
२० दिन सम्म पनी खुलेन पत्रकार महासंघ बझाङको कार्यालयमा लगाएको ताला
बझाङबाट मन्त्री भट्टलाई धम्की: ‘तेरो टाउको काटिन्छ’
१५ श्रावण २०७७, बिहीबार १४:५७ July 30, 2020 Khaptad Nepal
नयाँ सोच नेपाल बझाङ इकाईले गर्यो सदरमुकाममा सरसफाइ कार्यक्रम
१५ पुष २०७७, बुधबार ०६:२४ December 30, 2020 Khaptad Nepal
निषेधाज्ञा पछि सदरमुकाम चैनपुर सुनसान
१८ भाद्र २०७७, बिहीबार १९:५७ September 4, 2020 Khaptad Nepal
मन नै प्रफुल्ल बनाउने बिथ्थड पाटन (फोटो फिचर)
१० असार २०७७, बुधबार २०:५६ August 27, 2020 Khaptad Nepal
सुदूरपश्चिममा सोमबार सम्ममा पीसीआर बिधिबाट ३ हजार बढीको कोरोना परिक्षण
२९ बैशाख २०७७, सोमबार २१:३४ May 11, 2020 Khaptad Nepal
जिल्लाका थप चार स्थानमा यसै आर्थिक वर्षमा विओपी स्थापना हुदै
१२ भाद्र २०७७, शुक्रबार १८:३९ August 28, 2020 Khaptad Nepal
आरडीटी पोजेटीभ देखिएपछि स्वास्थ्यकर्मी माथि ढुङगामुडा प्रहार
१ असार २०७७, सोमबार २०:३८ June 15, 2020 Khaptad Nepal
बैतडीः गत बर्ष २३ सय सवारी साधन कार्बाहीमा,१३ लाख २७ हजार राजश्व संकलन
८ श्रावण २०७७, बिहीबार ०७:१२ July 23, 2020 Khaptad Nepal
स्वामीकार्तीक जिल्लाकै पहिलो कोरोना मुक्त गाउँपालिका
२६ असार २०७७, शुक्रबार २०:३१ July 10, 2020 Khaptad Nepal